Faallo: Shirka Afisyooni 20-ka May, Waa Rajadii ugu Dambeysay ee Doorashada Soomaaliya – Goobjoog News
Faallo: Shirka Afisyooni 20-ka May, Waa Rajadii ugu Dambeysay ee Doorashada Soomaaliya
Berri oo Khamiis ah waxaa lagu wadaa in Muqdisho uu ka furmo shirka doorashada looga hadlayo ee dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedyada. Shirkan oo uu horay isaga baxay Farmaajo 7-badii April ayaa rajo laga qabaa in raísul wasaare Rooble ku guuleysto wixii uu ku guuldareystay ninka isaga magacaabay, isla markaana uu la yimaado aragti hoggaan iyo go’áan qaadasho adag.
1: In Baarlamaanku uu noqdo kusime, isla markaana aanu wax shaqo dastuuri ah qaban.
2: In Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday ee Farmaajo uu qoro warqad uu ku cadeynayo in uu kusime yahay, uuna laalo awoodaha dastuuriga ah ee madaxweynnimo.
3: Xukuumaddu noqoto xil gaarsiin oo aysan qaadan qaraaro mustaqbalka sameyn yeesha
4: In Beesha Caalamka ay damaanad qaade ka noqoto heshiiska dowladda dhexe iyo maamul gobaleedyada
5: In shaqada laga fariisiyo Taliyayaasha Ciidammada ee qeeybta ka ahaa weerarkii 19 February Muqdisho ka dhacay , ee loo geystay madaxweeynayaashi hore .
6. in Shirka ka qeybgalaan saamileyda siyaasadda, oo aan lagu koobin oo keliya DF iyo dowlad goboleedyada.
7. In aan la siyaasadeyn ciidanka, isla markaana amniga doorashada lagu wareejiyo booliis iyo AMISOM.
Madaxda dowlad Gobaleedyada Oo Muqdisho Ku Soo Wajahan Maanta